Warbixin: Muxuu ka dhigan yahay go’aanka Maxkamadda ICJ | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Warbixin: Muxuu ka dhigan yahay go’aanka Maxkamadda ICJ
Warbixin: Muxuu ka dhigan yahay go’aanka Maxkamadda ICJ
Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda Adduunka ayaa diiday codsigii dowladda Kenya, ee ahaa in maxkamadda aysan qaadin dacwadda dhanka badda ee Soomaaliya iyo Kenya.
Maxkamadda ayaa horay u dhagaysatay dacwadda Soomaaliya iyo Kenya hase ahaatee shalay ayay go’aansatay inay xalin doonto muranka labadan dowladood ee deriska ah.
Markii uu soo baxay go’aanka maxkamadda waxaa la dhacday Soomaaliya waxaana ka murugootay Kenya.
War ka soo baxay xafiiska xeer-ilaaliyaha guud ee Qaranka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in go’aanka maxkamadda uu yahay guul Soomaaliya u soo hooyatay.
Inkastoo middan ay tahay talaabo bilow ah hadda guul u ah Soomaalida meel walba oo ay joogaan haddana sheekadu waa “Faanoole Fari kama qodna”.
Halkan ka akhriso qayb ka mid ah go’aanka maxkamadda ICJ
Maxkamaddan Ku taala dalka Holland/ Netherlands gaar ahaan magaalada Hague ayaa ah mid sharci ahaan awood u leh inay xaliso khilaafaadka Caalamiga ah ee dowladaha Adduunka, waana maxkmad hoos tagta Qaramada Midoobay.
Dadka Soomaaliyeed ayaa u arka midan inay tahay bilowga guusha Soomaaliya.
Halka la isku haysto waa meel milkiyadeeda ay si rasmi ah ay u leedahay Soomaaliya.
Kenya ayaa hunguri xuma qaaday markii ay sheegatay dhul Soomaaliyeed.
Dowldda waqtigeedu dhamaaday oo arrimo badan Ku fashilantay inay wax badan ka qabato sida Ammaanka oo Kale, ayaa waxaa wax xoogaa ah lagu amaanaa mowqifka ay ka is taagtay dacwaddan. Waxaa ay amar kusoo rogeen shirkadihii sahmin shidaal ka waday biyaha Soomaaliya oo qayb ka mid ah Kenya sheegatay, taasi oo lagu guulaystay in shirkdaha ay ka yaacaan goobta.
Caalamka oo idil waxaa uu dareensan yahay in ay tahay in hadii biyahan la isku haysto cid aan Soomaaliya ahayn loo xukumo ay tahay dambi Caalami ah oo laga galay Soomaaliya.
Kenya oo ah dal baddu ay Ku yertahay ayaa waxaa ay leedahay hal dikad oo Kali ah taasi oo ah midda magaalada Mombasa.
Hadii Soomaaliya loo xukumo ayna Ku guulaysato dacwadan islamarkaana Ingiriiska uu aqoonsado guddiga Mambasa waxaa ay noqonaysaa in Kenya ay noqoto wadan aan bad lahayn sida Uganda iyo kuwa la isku yirahdo dalalka Harooyinka.
Previous articleWaa kuma gudoomiyaha cusub ee Midowga Afrika
Next articleKenya loses first round in battle with Somalia on maritime border